Badhasaabka Togdheer Oo Digniin U Diray Dhalinyarradda Ku Kaca Falalka Budhcadnimadda Ah | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Badhasaabka Togdheer Oo Digniin U Diray Dhalinyarradda Ku Kaca Falalka Budhcadnimadda Ah
Published on September 29, 2016 by sdwo · No Comments
Burco (SDWO.com): Badhasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Qabo, ayaa sheegay in ay tallaabo adag ka qaadi doonaan kooxo dhalinyarro hubaysan ah oo khal-khal ku riday amaanka magaaladda Burco, isla markaana bulshadda ku dhibaateeya jidadka.
Waxaanu badhasaabku digniin adag u diray waalidiinta oo uu ugu baaqay in haddii ay ilashan waayaan ubadkoodda in maamulka gobolka, gudiga nabadgeliyadda gobolka iyo hay’adaha amaanku ay tallaabo ka qaadi doonaan.
Kooxahan dhalinyaradda shuftadda ah oo mudooyinkan danbe ku soo kordhay magaaladda Burco ayaa la sheegay in ay xaafadaha magaaladaasi ka gaystaan falal budhcadnimo ah, iyadoo baadhasho iyo dhibaatooyin kaleba u gaystaan dadweynaha.
Maxamed Ibraahim Qabo, waxa uu sidaasi ka sheegay kulan uu maanta xafiiskiisa kula yeeshay laamaha amaanka ee gobolka Togdheer. Kulankaasi oo lagaga wada arrinsanayay sidii la isaga kaashan lahaa qorshena looga yeelan lahaa wax ka qabashadda kooxahan shuftadda ah eek a dilaacay magaaladda Burco.
Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay badhasaabka gobolka, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdher, guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer, taliyeyaasha saldhigyadda booliska ee magaaladda Burco.
Badhasaabka Togdheer ayaa ugu horayn waxaa uu baaq u diray waalidiinta, isagoo u jeediyay in ay ilaashadaan caruurtoodda. Waxaanu yidhi “Waxaa laga rabaa waalidiinta in ay ogaadaan meesha ay ka soo toosaan ubadkoodu, waxaananu uga digaynaa waalidka iyo caruurtoodaasi, tallaabo ayay dawladu ka qaadi doontaa, gobol ahaan, ka gudi nabad-geliyo ahaan, iyo ka maamul ahaan”.
Maxamed Ibraahim Qabo, waxa uu sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin lagu xakamaynayo dhalinyaraddan shuftadda ah. “Waxaanu qaadi doonaa tallaabo, tallaabadaasina ka farxin mayso in badan oo waalidiin ah. Waxaanu halkan u marinaynaa waalidka ilmahiisa hayn waaya, waa loo haynayaa, oo dawladda ayaa u haynaysa. Haddii aad waalidoow haysan waydeen ilmihiinii, anaga ayaa idiin haynayna.
Waxaananu idiinku haynaynaa in aanu tarbiyadiisii hore dib ugu soo celino, in aanu naas-nuujintiisii dib ugu soo celino. Waxaanu u haynaynaa in aanu dhibin dadka dariiqyadda maraya, oo aanu noqon qaadicul-dariiq”ayuu yidhi guddoomiyaha Togdheer.
Geesta kale guddoomiyaha gobolka Togdheer, mar uu faahfaahin ka bixinayay kooxahan dhalinyaradda ah iyo falalka ay gaystaan, waxa uu yidhi “Waxaa beryahan Burco ka dhaca, oo aan hore uga dhici jirin, in dhalinyarro aad u yar yar oo 20 jirro ah, oo waxbarta oo arday ah, inta ay Go dhigtaan dariiqyadda magaaladda Burco, in of kastoo soo mara dariiqaasi ay ku yidhaahdaan 2000 Shilling ku rid, oo ay dadka baad ka ururiyaan.
Mid wadaad ah, mid waayeel ah, hooyooyinka iyo hablaheenii, in ay ku yidhaahdaan 2000 shilling ku rid, hadddii kale halkaa dhaafi maysid, iyadoo ay dhacdo in qofka Saacadda uu xidhan yahay laga furto, ama wixii la doonno lagu sameeyo”.
Waxaanu intaasi ku daray “Socon mayso, caqli qal-na ma aha, in hablaheenii Dahabkii laga furto, oo Diriceedda laga furto. Dhalinyaradani waxa weeyi kooxo budhcad ah, oo sita Faashash, Soodhadh iyo mindiyo, oo dadka baqdin gelinaya, ayaa ka buuxa Burco.
Waxaanu uga digaynaa mar iyo lababa, waalidku waa ka koow, waxaanan leenahay ilaashadda oo haysta ubadkiina”ayuu yidhi Qabo.
Si kastaba ha ahaatee, magaaladda Burco ayaanay hore uga dhici jirin dhalinyarro kooxaha oo hubaysan falal dhibaayan ah in ay gudaha magaaladda ka gaystaan.
Inkastoo qaar ka mid ah magaalooyinka dalka gaar ahaana caasimadda Hargaysa in ay sidan oo kale uga jiraan dhalinyarro kooxo ah oo xiliyadda habeenkii baadhasho iyo dhibaatooyin kale kulak aca dadweynaha.